समय सन्दर्भ : आऊ मिलाऔं हाम्रा हातहरु :: Press Chautari ::
ह्वेयर देयर इज युनिटी, देयर इज अल्वेज भिक्टोरी
“जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ जीत अवश्याम्भावी हुन्छ ।”
१८ औं शताब्दीका ल्याटिन लेखक पब्लिलिउस साइरसको प्रस्तुत भनाईबाट 'समय सन्दर्भ'को यो श्रृङ्खला जोड्न चाहे । सन्दर्भ चाहि उहि-“नेपाल डे परेड” कै हो ।
कतिलाई चाहि लाग्दो हो, मैले पनि फेरि तिनैको पक्षपोषण गर्न लागे भनेर । तिनै भन्नाले केहि नामहरु जो अघिल्लो पंक्तिमा सुनिदै र देखिदै आएकाछन् । प्रसंगले पुर्याएमा ति नामहरु क्रमसः उल्लेख गरुँला ।
अनि केहिले चाहि सोच्दा हुन्, हृदय कुँडिएर बहकिएको बिचारोत्तेजित लेख ।
यहाँ निर सप्पै सप्पै वेवास्ता गर्दै बेहिसाब जे लाग्यो दुरुस्तै लेख्ने यत्न गर्दैछु । थाह छैन तपाईलाई चाहि कस्तो लाग्छ कुन्नी ? आलेखको पुच्छरमा तपाईको आफ्नो प्रतिक्रिया थप्नु होला ।
सन्दर्भ, त्यहि हो में २२ तारिख न्युयोर्कको म्यानह्याटनमा आयोजना गर्न लागिएको “नेपाल डे परेड” । केहि साता बित्यो सामाजिक सञ्जालहरुमा यसले गर्मागर्मी बहसको थान पाएको । कसले के भने ? र कस्तो प्रतिक्रिया दिए ? मैले यहाँ दोहोर्याउनु हामी सबैको समय बर्बादी गर्नु सिवाय केहि हुने छैन ।
विश्वको व्यापारिक केन्द्रको रुपमा परिचित म्यानह्याटनको “ब्रोड वे” मा आयोजना गर्ने भनिएको ऐतिहासिक “नेपाल डे परेड” आयोजकले भने जस्तैं ऐतिहासिक बन्ला या नबन्ला, यसमाथि अहिले नै आशंका गरि हाल्नु चाहिँ हतार हुन्छ । “इस्ट रिभर” तरेर “ब्रोड वे” सम्म पुग्नु, उभिनु र दुईचार कदमसँगै हिड्नु मात्रै ऐतिहासिकताको मानङ्क होइन । न की उपलब्धि यहि हो ।
पुग नपुग एक किलोमिटर (शून्य दशमलव ६ माईल) क्षेत्र परेड प्रर्दशनको लागि अनुमती प्राप्त छ । नेपालीहरुको लागि यो दुरी र क्षेत्र मनग्गे हो । साबिकका अन्य दिनहरुमा पनि पैदलवालाहरुको घुँइचो हुने “ब्रोड वे” मा मध्यन्ह्को १२ देखि ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल र नेपाली चिनाउने यो ऐतिहासिक तिथी र उत्तम समय पनि हो । यहि दिनलाई ऐतिहासिक बनाउने या सरम लाग्दो बनाउने यो चाहि हामी सबैंबाट मात्र सम्भव छ ।
कुनै खास व्यक्ति, जाति र समुदायसँग होइन यो सिंगो देशसँग जोडिएको कार्यक्रम हो ।
हो त, न्युयोर्कको म्यान्ह्याटनमा आयोजना हुने यस परेड कुनै चियन फेडेरेसन या कुईन्स प्यालेस हलमा आयोजना हुने कुनै कलाकारको कन्सर्ट जस्तो होइन । न त यहाँ स्थापित संघ/संस्थाको नियमित कार्यक्रम जस्तो नै । यी र यस्ता कार्यक्रमहरु सफल या असफल हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा खासै महत्व राख्दैन । यद्यपी यी कार्यक्रमहरुको महत्व र सुन्दरता परेडसँग दाँज्नु पनि मिल्दैन ।
देशसँगै जोडिएको “नेपाल डे परेड” असफल हुनु भनेको नेपाल र नेपाली असफल हुनु जत्तिकै हो । उत्तरबाट दक्षिण दिशा तर्फको “वान वे” सडक “ब्रोड वे”को खुल्ला सडकमा नेपाली जाति, नेपाली संस्कृति र नेपाली पहिचान भव्य रुपमा प्रर्दशन गर्न सके यसले दिर्घकालिन फाईदा “नेपाल” भन्ने देश र “नेपाली” भन्ने जातिलाई नै पुग्ने हो । यसदिन दौरासुरुवाल, बख्खु, धोती, भाङ्ग्रा, चोली पटुकी या हाकुपटासी जे-जे लाए पनि हामी जस्तै अन्य आप्राबासी र यहिका रैथानेले “हामी नेपाली” भनेरै चिन्नेछन्, “हामी नेपाल देशको” भनेर जान्नेछन् ।
उनीहरुलाई यकिन हुने छैन कि त्यो परेडमा खास जाति र खास समुदायको मात्र उपस्थिती छ भनेर ।
त्यसदिन “हामी नेपाली” भएर सबैले त्यसै गरौं न ।
त्यो खुल्ला सडकमा कसैले कौडा नाँचौं, कसैले मारुनी, सेलो, साकेला र घाटु नाँचौं । कसैले अनेकतामा एकताको हाम्रो सिङ्गो देशै बोकेर सप्तरंगी होलिया रंङ खेलौंन । हाकपारे, लैबरी र भजन गाऔं । हामी नेपाली भएर यसो गर्दा ति बिदेशी आँखालाई कति आनन्द आउँदो हो हगी ?
वास्तविकता हो, नेपाल विविधता बाँडिएको मूलुक हो । यहि विविधता हाम्रो लागि सर्वाेत्तम सुन्दरता हो । विविधतामा बिभाजित यहि सुन्दर पक्षलाई नै मूल शक्ति ठानेर अब अघि बढ्ने हो कि ?
च्यालेञ्ज आर एन अर्पच्युनिटी टु टेष्ट यु एण्ड राईज टु द नेक्स्ट लेबल
“चुनौतीहरु तिमीलाई परिक्षण गर्ने त्यस्तो एउटा अवसर हो, जसले तिमीलाई उपल्लो स्तरमा पुर्याउछ ।”
प्रेरणादायी लेखिका एञ्जेलिका मन्त्रोस्को प्रस्तुत भनाई यहाँ निर उपर्युक्त ठान्दछु ।
“नेपाल डे परेड” को आयोजना आफैमा सरल कार्यक्रम भने चाहि पक्कै होइन । तर यसलाई अवसर ठानेर सबै जुट्ने हो भने विश्व सामु धुमिल बन्दै गएको नेपालको परिचय थोरै मात्रा पनि अग्लिने निश्चित् प्रायः छ । मैलिदै गएको हाम्रो चिनारी केहि उजेलीने छ । “परेड”को लागि अघिल्लो लहरमा उभिएकाहरुले चौडा र फराकिलो सोँच र विचारका हिमालहरु उभ्याउँन सक्नु पर्छ । चुनौतीका आँधी तुफान नै आए पनि पहाड भएर छेक्न सक्ने हिम्मत जुटाउन पर्छ । अनि अनेकताभित्र एकताको तराईहरु सम्याउन तयार हुनु पर्छ । अब त्यो आँट र हिम्मत जुटाउनुहोस् ।
यत्तिबेला तपाईहरु त सफा र कञ्चन नदी भएर पो बग्नु पर्छ । सक्नुहुन्छ भने समुन्द्र भई दिनुहोस् न है ?
हिजो छुटेहरुलाई सँगै लिएर जानुहोस् । विभाजित विचारहरुलाई एउटै नाङ्लोमा निफन्नुहोस् । आफुसँगैका वा अगाडिकाहरुलाई मात्र होइन तपाई पछिकाहरुलाई नियाल्नुहोस् । उनीहरु तपाईसँगै हिड्न चाहन्छन् । तपाई जस्तै देश चिनाउन तयार छन् । छातीमा देश बोकेर शीरमा चन्द्र सुर्यांकित झण्डा फहराउँदै “ब्रोड वे” मा “परेड” गर्न आतुर छन् ।
तपाई हात दिन तयार हुनुहोस् न है ?
जोसँग जे छ त्यहि माग्नुहोस् । धन हुनेसँग धन, मन हुनेसँग मन अनि जन हुनेसँग जन माग्नुहोस् । तपाई त यत्तिबेला केवल माग्ने मात्रै हुनुहुन्छ । माग्नेले हात तल बनाउँदा कोहि सानो, होचो वा पुड्को भईन्न । अनि पो दिनेले पनि दिल फुकाएर दिन्छन् त ।
यो कोलम्बसले भस्मे फाँडेर मानवबस्ती बसालेको आप्राबासी बस्तीमा हामीले नेपाल र नेपालीकै परिचय बाँड्दै हिडेका पहिलो पुस्ता हौं । पहिलो हुनुको जिम्मेवारी र दायित्वबोधसँगै हामीले हाम्रो आफ्नो मौलिक कला, भाषा र संस्कृति जोगाउँदै पुस्तान्तरण गर्नु छ । बाँडिएको भूगोल उतै छोडे पनि हामीले छातीमा सिंगो देश बोकेर यता आएकाछौं । र त हामीसँगै आएकाछन् हाम्रा खास आफ्नाहरु ।
हामीले यहाँ पनि हुर्काएका छौं हाम्रो चिनारीहरु । उभ्याएकाछौं इमान्दार र परिश्रमी जातिको आफ्नै 'सगरमाथा' । र निमार्णको क्रममा छौं -'सानो नेपाल' । अनि त बाँडिएकाछौ यहाँ जातिहरुमा । बिभाजितहरु छौं क्षेत्रहरुमा । तर जब राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल आउँछ हामी सप्पै सप्पै जोडिनु पर्छ । हामी जोडिनु मै सर्वश्व छ ।
यसैले त हामी सबै अटाउने साझा र फराकिलो थलो बनाऔं । जहाँ जाति अटोस्, क्षेत्र अटोस् । हिमाल अटोस, पहाड अटोस र अटोस् तराई । अनि मात्रै अट्नेछन “नेपाल र नेपाली ।”
सामाजिक सञ्जालहरुमा जे जस्तो विचारहरु पोखिएकाछन् एकले अर्काको विचारको सम्मान गरेर स्वाथ्य बहसको लागि जो कोहि तयार हौं । सम्वादभित्रै सहकार्य खोजौं र मान्नुहोस् नमान्नुहोस “सम्भावना पनि त्यहि छ ।”
अब पनि हामीबीचको सामाजिक र सांस्कतिक सहिष्णुता कमजोर बनाउनु हुन्न है । हामीले त सुनाउनु छ यहाँ “भुकम्पले हाम्रो देश केहि कमजोर मात्रै भएको छ हेर्नै नहुने कुरुप भएको छैन, हेर्नुहोस त हाम्रो हिमाल उस्तै अग्लो छ ।” देखाउनुछ “हामीमा विविधता छ, बिभाजित छैनौ, किन कि हामीमा बुद्ध मन सजिव छ ।”
जसरी यो पातालभूमीमा हामी देशसँग जोडिएका छौं त्यसैगरी आगामी “नेपाल डे परेड”सँग पनि हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल जोडिने छ । यसर्थ अपरिहार्य त हामी कोहि हुँदै होइनौं तर हामी मध्ये कोहि पनि नछुटौं । जसको लागि हामी मध्ये एनआरएन, जनजाति, राजनीतिक आस्थावान, पेशागत बुद्धिजीबि, व्यावसायी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, खेलाडी, कलाकार जो जेसँग आवद्धता राख्दछौ सबैको सत्प्रयासले नै “नेपाल डे परेड” सम्भव छ ।
एकले अर्कालाई भन्न सकौं
“म दिन्छु मेरा हातहरु,
तिमी देऊ तिम्रा हातहरु
आऊ मिलाऔं, हाम्रा हातहरु ।”
बुधवार, २०७२ चैत्र २४ गते १९:५६ / Wednesday, Apr 06, 2016 7:56 pm
26. "एई श्यामे..."
27. "न्यू योर्कमा कवि तुलसी दिवस"
28. "गिनिज बुकमा – हामी"
29. "असार, लम्पसार"
30. "यसपाली, आफ्नै कुरा"
31. "उनको पौरख–देशको गौरव"
32. "गणतन्त्र दिवस .... 'केवल विस्मात"
33. "....ऊ नेपालको छोरो"
34. "आमा ! ह्याप्पी मदर्स डे"
35. “जंगे पिलर गाईबस्तु बाँध्ने किला होइन”
36. वाह ! नेपाल, क्यावात नेपाली
37. वेम्ब्लीमा नेपथ्य
Results 37: You are at page2of 2